Nkọwapụta nke Vivo Y3 agbapụtala kpamkpam | Androidsis
Igwefoto azụ atọ na Helio P35 bụ ihe ga-abata na Vivo Y3 ugbu a
Ọhụụ ọhụụ ekpughere na Vivo nwere ekwentị ọhụrụ dị n'etiti mmepe. Ngwaọrụ, akpọ Vivo Y3, na-ekerịta ọtụtụ nkọwa ya na ọbụna imewe ya na nke a mara ọkwa ugbu a Vivo Y17, ọdụ ọzọ dị n'etiti.
N'ime ehi a, ekpughewo uru nke Vivo Y3, na anyị kọwara ha n'okpuru. Anyị na-egosipụtakwa ihe igwefoto nke ngwaọrụ abịagoro yana njirimara ya niile.
Dika ihe anakọtara n'ikpeazụ, Vivo Y3 nwere a Ihuenyo 6.35 nke nwere HD + mkpebi nke pikselụ 1,544 x 720. Nke a bụ Halo FullView nwere akụkụ 19.3: 9 na ọkwa mmiri.
Vivo Y3 leaked
N'ime e nwere Helio P35 chipset si MediaTek, nke ejikọtara ya na 4 GB nke RAM na 64/128 GB nke ohere nchekwa dị n'ime.
Vivo Y3, dị ka Y17, nwere a modul igwefoto atọ na nhazi ahụ bụ otu. Igwefoto kachasị bụ ihe mmetụta 13 MP na ọ na-ejikọta ya na 8 MP super wide angle sensor na ihe mmetụta omimi nke 2 MP. Enwere ọkụ ọkụ n’okpuru ihe mmetụta na nyocha mkpisiaka dị n’etiti. Agbanye, gbanwere igwefoto selfie nke 20 MP maka ihe mmetụta 8 MP.
Ọ na-eyi a 5,000 mAh nnukwu batrị n'okpuru mkpuchi nke na-akwụ ụgwọ site na ọdụ ụgbọ mmiri microUSB na, dị ka Y17, kwesịrị ịnwe nkwado maka teknụzụ na-ebu ọkụ ngwa ngwa 18W.
Vivo S1 Pro: Igwe ọhụụ dị n'etiti igwefoto nwere ike iwepụ
Ihe mgbakwunye ahụ dị n'elu na-egosi nke ahụ ekwentị ga-abata na ụdị agba pink nke a na-akpọ Peach Powder. A na-atụ anya na Vivo Y3 ga-ebupụta na China mgbe ọnwa a gasịrị, ọnụ ahịa ya dịkwa gburugburu 1,400 yuan (~ 190 euro), dịka isi mmalite ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Igwefoto azụ atọ na Helio P35 bụ ihe ga-abata na Vivo Y3 ugbu a
Nyere enyi enyi enyi enyi gafere ọtụtụ akwa mmiri na Euler the Elephant
A na-ekpughe ọnụahịa Oppo K3 na nkọwapụta n'ụzọ zuru ezu